Rust Hacks 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Ukufikelela kuzo zonke iiRust Hacks zakho ozithandayo ezivela kwiGamepron! Singakunika ukufikelela kwiiRust Hacks njengeAimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil.
Sele uthenge iRust Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge iiRust hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, nto leyo ethetha ukuba unokuzisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Ukugqithisa Hacks
Rust Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks kunye nokunye
Thenga Ukugqithisa IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Sigubungela imidlalo emininzi apha kwiGamepron, ke okokuqala, kuya kufuneka ukhethe isihloko esifanelekileyo
Kukho ii-hacks ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, ke khetha leyo ilungele iimfuno zakho
Yonke intlawulo esiyithathayo iphathwa yinkqubo yethu yokuhlawula eyodwa, ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela ii-Apex Legends Hacks!
Nje ukuba ufumane ukufikelela kwisitshixo semveliso esifanelekileyo, unokukhuphela ukukopela kwakamsinya nje ukuba kufumaneke!
Kutheni usebenzisa i-Gamepron Rust Hacks?
Ngokukhutshwa kohlaziyo lukaRust ngoJulayi, umdlalo ubonile ukukhutshwa kweLizwi Props DLC, ivumela abadlali ukuba benze izinto ngesandi abasakwaziyo ukuza kuthi ga ngoku. Umzekelo, ngoku ungasebenzisa iiselfowuni kwaye ushiye ngasemva imiyalezo yezwi koomatshini bokuphendula kwaye ungasebenzisa irekhodi labadlali.
Uhlaziyo lokugqibela lukaRust lujolise ekuchazeni ngokutsha indlela ilizwe elonzakeleyo nelisezantsi elisebenza ngayo kumdlalo, kunye nokukhasa okutsha okukhoyo okunika ithuba elingcono lokubuyela umva kunelizwe elingakhubazekanga. Uhlaziyo olutsha luya kuqinisekisa ukuba iNvidia DLSS isebenza kakuhle, ikuvumela ukuba udlale kwi-UHD kwiifreyimu ezingqinelanayo.
Umhlwa ubungekho kuhlaziyo lwamva nje okwethutyana, kodwa oko akuthethi ukuba akukho zindaba zimalunga nophuhliso lomdlalo. Kubonakala ngathi uhlaziyo olukhulu olulandelayo kwiRust luza kuba ngumdlalo ogqityiweyo womdlalo, uwuzise ngokuhambelana nezinye izihloko zangoku ukuze ungakhange ubonakale ungowomhla.
Ukurusa bekusisihloko esithandwayo sokusinda kwiminyaka embalwa ngoku, kwaye oko kuthetha ukuba inani labadlali abonwabela umdlalo likhule ngakumbi. Ngelixa mininzi eminye imidlalo yokusinda ekhutshiweyo kwezi ntsuku, bambalwa kakhulu kubo abazakuba mnandi njengoRust! Kukho umtsalane othile wokuqala njengempandla kunye nomntu ohamba ze, kuphela ekusebenzeni indlela yakho phezulu kwaye ube ngukumkani phakathi kwabantu. Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokusondela ekudlaleni iRust, ekusenokwenzeka ukuba kutheni le nto yafumana ukubambeka ngokukhawuleza-ungakhetha ukudibana nabahlobo bakho kwaye wakhe indawo yokuhlala enkulu, okanye uhambe ngezinto ngendlela yakho kwaye uthathe izinto kancinci.
Nokuba ucwangcisa kanjani ukudlala, ukusebenzisa iiRust Hacks zethu kuya kukubeka ethubeni lokugqwesa kunye nokuchuma kolu seto lokusinda. Nokuba kukuzimela kwiitroli kunye neentlungu xa zifika ezandleni zakho, okanye ujonge isibonelelo ngelixa uqhuba iimfazwe zePvP (Player Versus Player). Ungangena engxakini enkulu ngelixa udlala iRust, kwaye ungaphulukana nenkqubela phambili yakho ngokukhawuleza; konke okudingayo kukukhawulezisa ngokukhawuleza izembe ukuphelisa "ulawulo" lwakho kulo mdlalo. Ngelixa kuyinyani, iRust Hack yethu iya kunceda ukuthintela loo nto ukuba ingenzeki.
Imipu kunye nezixhobo zeprojekti zinqabile kwiRust, kodwa xa uthe wazibeka izandla, unokubetha umhlaba usebenze. Ngokusebenzisa izinto ezithandwa yiRust Aimbot kunye ne-ESP / iWall Hack, uya kuba nakho ukugcina umkhondo wazo naziphi na izoyikiso ezinokuzimela kwisiseko sakho. Ukuba uqala nje usenokungabi nanto ilahlekileyo, kodwa abo baneziseko ezinkulu ezizaliswe ngempango baqonde ukuba kunjani ukuhlaselwa. I-Rust Hack yethu ayigcini ngokubekwa kuphela xa kufikwa kwinani lezinto ezikhoyo, kodwa sikwabonelela ngokhuseleko olwaneleyo ngohlobo lwenkqubo yokhuselo lokukhusela inkohliso ekhoyo.
Khange sisike iikona kwaye ngekhe sincame umgangatho wezixhobo zethu ukugcina idola, yiyo loo nto abathengi bethu bezimisele ukubuyela kuzo zonke iimfuno zabo zokugenca. Nokuba yiRust Hack okanye nayiphi na into oyikhohlisayo kwimidlalo oyithandayo, i-Gamepron izakulungiselela ukuphumelela. Kutheni ushiya izinto ngamabona-ndenzile? Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye ulawule abachasi bakho ngaphandle komzabalazo.
Rust Wall kugula (ESP)
Ulwazi lomdlali weRust ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Rust Item ESP eneefilitha
Izilumkiso zezilumkiso zentshaba
Rust imowudi yokutsiba enkulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Umhlwa wethambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Umhlwa Wokuhlawula umbuyekezo
Ngokufanelekileyo Ukugqithisa yimfumba Iimbonakalo
Sebenzisa iRust Player yethu i-ESP igqibelele kwabo bangaze bafune ukumangaliswa, njengoko ukwazi ukubona iintshaba kwiindawo eziqinileyo nezintle.
Umdlali skeleton ayisiyiyo kuphela into onokuyibona ngeRust ESP kunye neWall Hack, njengoko ubona amagama abo, amanqanaba ezempilo kunye nomgama!
Ukuphanga kunye nokuqokelela izixhobo kubalulekile kwiRust, kwaye nge-Item ESP (w / filters) ungafumana eyona nto iphambili ngaphandle komsebenzi omninzi.
Injongo yakho ifuna ukungagqitywa yiRust, njengoko unokufumana ifoto enye kuphela. Yiyo loo nto iRust Aimbot yethu sisixhobo esifanelekileyo sokuyisebenzisa!
Umkhondo weBullet track (esebenzayo kwimigama emifutshane kunye naphakathi)
Landa umkhondo weebhulethi zakho eRust ngaphandle kobunzima usebenzisa inqaku lethu lokuRula iBullet Track (ilungile kwimipu ethathwe kufutshane nakumbindi womgama)
Umyalezo osisilumkiso wesiko uza kubonisa kwiscreen sakho nanini na utshaba lusondele okanye lujolise kumlinganiswa wakho.
Rust imowudi yokutsiba enkulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Sebenzisa iRust Super Jump Mode ukunqanda ukonakala komdlalo. Zilungiselele iintshaba zakho ezivela phezulu ngeli nqaku linikwe amandla!
Umhlwa wethambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
I-Rust Aimbot yethu inokuqwalaselwa ngokupheleleyo, ikunike amava obuqu anokufumaneka apha kwiGamepron.
Rust aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kuyafumaneka kwabo bakonwabelayo oko kwiRust Aimbot yabo. Ukufezekisa umdlalo weRust onomdla kunye namaxesha.
Ukubuyisa imbuyekezo ikwakhona kwiRust Hack yethu, ekuvumela ukuba ujonge kwaye ucime umlilo ngaphandle kwempembelelo. Umhlwa waziwa ngokubuya kwawo okucaphukisayo!
Yiba ngoyena Mdlali uQhelekileyo Rust kwiPlanethi
Umhlwa ngumdlalo onikezela ngejika elikhulu lokufunda. Ukuba awuzange uyidlale ngaphambili kwaye eli lixesha lakho lokuqala ukuya kumava, uya kuba nexesha elinzima. Ungasebenzisa iiRust Hacks zethu ukuqinisekisa ukuba unamava amahle ngelixa udlala, kunye nokwenza iintshaba zazi ukuba awuzukuphazanyiswa nazo! Akunyanzelekanga ukuba uzilungiselele kumava okusilela.
Rust Hacks edumileyo kunye nokukhohlisa
Umhlwa ESP kunye neWallhack
Rust Footprint, Umonakalo ophezulu kunye neHack Hack
Ezinye iiRust Hacks kunye nokukhohlisa
I-Gamepron yi-100% ezinikele ekuboneleleni abasebenzisi bethu ngeyona Rust Hacks idumileyo kunye nokukhohlisa okufumaneka kwintengiso. Oku kuthetha ukuba siza kuphanda kwaye sifumanise ukuba zeziphi izinto abathengi bethu abafuna ukuzibona kakhulu kwizixhobo zethu, kwaye emva kokuqokelela idatha, siya kuziphumeza ngokufanelekileyo. Abanye abaphuhlisi bokulibala bayalibala ngokubaluleka kokubandakanya amanqaku amaninzi kwiRust Hack yabo kwaye banokwazi ukugxila kwinto enye okanye ezimbini njengesiphumo- xa ufuna ukwazi ukuba uza kufumana ukufikelela kwezona zinto zinokwenzeka, ayikho enye indawo yokujika kuneGamepron.
Umhlwa ngumdlalo othandwa kakhulu ngokwawo, odale isidingo esithile seRust Hacks kunye nokukhohlisa kwi-Intanethi. Nokuba ukhethe umdlalo nje okokuqala kwaye uneengxaki, okanye ungumdlali onamava ofuna nje "ukudlala uThixo" kancinci, ukusebenzisa iiRust Hacks zethu kuya kukunceda kakhulu.
Xa ucinga ngomdlalo onje ngeRust, uninzi lwabantu luzakuwudlala ukuze lusinde. Bafuna ukwakha iinqaba kunye nokuqokelela izixhobo zokuqhubela phambili kumdlalo, kodwa uthini malunga nenxalenye yePvP yako konke? Xa ucwangcisa ukulwa nabanye abadlali ukubona ukuba ungazikhusela na iimpahla zabo, uya kufuna ukuya emfazweni ngoncedo oluncinci. Kulapho iRust Aimbot yethu iza kudlala khona, njengoko inika iinketho ezinje nge-Bone Prioritization kunye ne-Auto-Aim / yoMlilo ukukugcina ukhula kwihlabathi lomhlaba. Ayinamsebenzi ukuba ukhawuleze kangakanani umnwe wabachasi bakho, njengoko uhlala ukhawuleza.
Unokukhetha iindawo ezithile zomzimba ekujolise kuzo xa iRust Aimbot yethu yenziwe, kodwa ungasebenzisa nje umsebenzi wethu wokubulala ngokukhawuleza ukuphelisa abachasi bakho ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo. Ezinye iindlela ezininzi zeRust Aimbot azinakubalwa kwaye ngamanye amaxesha ziyenze icace into yokuba uyaphula!
Sebenzisa iRust ESP yethu kunye neWallhack ngokuqinisekileyo kuya kukunika amandla, njengoko iintshaba ziya kuvezwa xa uyenza ukuba ibekho. Uyakwazi ukubona naziphi na izoyikiso ezinokuzimela kwindawo yakho, kunye nolunye ukhetho oluncedo lwe-ESP. I-ESP imele ukuBonwa okuNgezelelweyo kokuqonda, kwaye ubukhulu becala ukukwazi ukubona iimodeli zomdlalo ongaphakathi kwiindawo eziqinileyo. Uyakwazi ukubona ukuthanda abadlali ngokwabo, kunye nokuba banempilo engakanani na kunye nomgama wabo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ungayisebenzisa ukubona ukuba loluphi uhlobo lokuphanga / izinto ezikhoyo ngaphambi kokuba ungene nakwindawo.
Usenokuzibuza ukuba bangaphi abantu abafumana impumelelo kummandla wePvP weRust, kodwa uninzi lwabo luyaqhekeza. Ayisiyomfihlo ukuba baninzi abagcini abajongana nePC, kutheni ungazibandakanyi nolonwabo? Usebenzisa iRust ESP kunye neWall Hack kuya kukuvumela ukuba ubaleke kwaye uthathe iintshaba njengoko uthanda.
Sebenzisa iinyawo zethu, ukonakaliswa okuphezulu, kunye nokuHamba okuPhakathi yeyona ndlela ilula yokuthatha izoyikiso ezinokubakho ngelixa udlala umhlwa. Abantu banyanzelekile ukuba bazulazule kwiseva yakho, ngakumbi abadlali bezinga eliphantsi abanokuzama ukutsala ngokukhawuleza kuwe. Kukho isizathu sokuba abantu abaninzi bathembele kwii-hacks zethu ukuze bagqwese, kwaye inqaku leFootprint yenye yazo-uya kubona imikhondo emhlabeni ekhokelela kutshaba. Ukusuka apho, ungasebenzisa inqaku lomgama ukuzama kwaye ubone ukuba lukude kangakanani utshaba phambi kokuzibandakanya. Ukugcina umkhondo wezisongelo ezinokubakho kulula xa uxuba zonke izinto eziluncedo "zeradar" ezinikezelwa kwiRust Hack yethu!
Ukonakala okuphezulu komonakalo kuluncedo kwizizathu ezicacileyo, njengoko uza kwenza umonakalo omkhulu kunaye nawuphi na umdlali odibana naye. Uya kubetha nzima nangona sixhobo siphambili somdlalo, ngenxa yoko unokucinga ukuba ungangathinteleki njani xa unezinto ezifanelekileyo.
Zininzi izinto onokuzifumana xa kusiza kwiRust Hack, ulinde ntoni? Zive ukhululekile ukuthenga ukufikelela kuzo zonke izinto ezimangalisayo zeRust cheats ngokuzigcinela isitshixo semveliso! Sinezinto ezithile abanye ababoneleli beenkonzo abanokuze babenobuganga bokuzibandakanya ekukhululweni kwabo, kwaye yile nto isenza ukuba sibe "ngumdlalo wokutshintsha umdlalo"! Xa ufuna ukufikelela kweyona Rust Hacks ilungileyo inokuthengwa yimali, i-Gamepron lelona gama kuphela eliza kuthi qatha engqondweni. Awunakuthembela kwabanye ababoneleli ukuba bakunike ukufikelela kwizinto ezithandwa yiRust Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil- leyo yincam yomkhenkce, nangona! Sikwabonelela ngokhuseleko olwaneleyo ngohlobo lwe-100% engafumanekiyo yeRust Hack, ekuvumela ukuba ukhohlise ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuvalwa.
Ngobuninzi beempawu onokukhetha kuzo kunye nokhuseleko olukhethekileyo olunokufumaneka apha kuphela, iRust Hack yethu yeyona nto ubonileyo.
Umhlwa Hacks imibuzo
Kutheni iiRust Hacks zethu
IiRust Hacks zethu zahlukile xa uzithelekisa nenketho yesiko. Sinezinto ezininzi kakhulu ezinokuthelekiswa nayo nayiphi na enye into eyilahleko, kwaye sigxile kumgangatho wezixhobo zethu ngokuchasene nobungakanani. Ukuba ufuna iziphumo, i-Gamepron kuphela komnikezeli we-hack onokumthemba. Awuyi kumosha nayiphi na imali yakho ukuba ukhetha ukugcoba umboneleli olungileyo.
Kutheni iRust Aimbot yethu
Sebenzisa iRust Aimbot yethu kuhlala kukubeka kwindawo yokuphumelela kumdlalo onje ngeRust. Xa ungadubula ngokuchaneka ngakumbi kunazo naziphi na izoyikiso ezifumaneka kumdlalo, kuncinci kakhulu okuya kukuncwina. Unokusebenzisa iRust Aimbot yethu ukuhlasela ezinye iziseko zabadlali! Umhlwa wethu weAimbot uza kukugcina uphila kwaye ukulungele ukugawula eminye imithi, kunjalo.
Kutheni umhlwa wethu ESP
Sebenzisa i-RUST ESP kufanelekile kwabo bafuna ukubona ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka. Uyabona ukuba luhlobo luni lokuphanga umntu olufihle kwisiseko sabo, nokuba kufanelekile ukuzama ukuhlasela okanye hayi-ungabona malunga nayo nayiphi na into kwiindawo eziqinileyo ezinalo msebenzi. Ulwazi oluthe kratya luya kukhokelela kwimpumelelo engaphezulu, okuninzi onokuthembela kuko!
Kutheni iRust Wallhack yethu
Umhlwa wethu wokuGqobhoza uluncedo kuba awusoze ulalele, into enkulu eRust. Abantu baya kukhangela isiseko sakho kangangeentsuku ngamanye amaxesha, kodwa ngeRust Wall Hack yethu, uza kubabona phantse kwangoko. Abanakucwangcisa ukulalela xa usendleleni yabo ngalo lonke inyathelo elithathwayo! IiWall Hacks zolu bukhulu azifumaneki rhoqo.
Kutheni iRust Norecoil yethu
Ukuphinda ubuye yingxaki enkulu kubadlali abakwaziyo ukufikelela kwizandla kwiRust. Bazamile ukwenza umdlalo ukuba ube yinyani kwaye oko kuthetha ukuba ukubuyela umva akunangqondo, kodwa ungakususa ngokupheleleyo ngokuvula umsebenzi wethu weNoRecoil, ofumanekayo ngaphakathi kweRust Hack yethu. Ayizukuphucuka nje ukuchaneka kwakho, kodwa akufuneki ujongane nolo “jittery” lokuziva abanye abadlali befumana ngenxa yokuchacha.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zirust?
Ezona Rust Hacks zibalaseleyo ziya kuhlala zifumaneka kanye apha eGamepron, kwaye loo nto iyathetha ngokuzinikezela kwethu kumgangatho. Unokuzikhuphelela iRust Hack emva kokuba uthenge imveliso efanelekileyo, kuxhomekeke kwinqanaba lokufumaneka kweRust Hack oza kuba nakho ukuyikhuphela kwangoko okanye ngaphakathi kweeyure ezili-9 zokuthenga.
Kutheni iRust hacks yakho ibiza kakhulu kunezinye
Ufuna ukuhlala ukhuselekile ngelixa ukopa, akunjalo? Kukho isizathu sokuba sithathwa njenge "kubiza kakhulu" xa kuthelekiswa nabanye abanikezeli bemithi yokukhupha izinto ngoku, ikakhulu kuba iinkonzo zethu zinomda. Sinenombolo ethile yeendawo zokubeka abasebenzisi bethu, oko kuthetha ukuba asinakukhonza wonke umntu! Zonke ii-hacks zethu zi-100% azibhaqwanga nazo.
Ungasebenza malunga nawo nawuphi na umda wexesha ongathanda ukuba ukhethe ukukopela nathi apha kwiGamepron. Sinezitshixo zemveliso ezikhoyo mihla le, ngeveki, nangenyanga, esikunika ubhetyebhetye obufunekayo ukuvavanya zonke izixhobo zakho ozithandayo. Nokuba ufuna ukuqhekeza ixesha elincinci okanye ixesha elide, i-Gamepron iya kuba nenketho efanelekileyo kuwe.
Kuhle Ukugqithisa yimfumba Iimbonakalo